July 17, 2020 176
हरेक विवाहमा बेहुला बेहुलीपछि तिनका जन्ती महत्वपुर्ण मानिन्छन् । विवाहमा आएका पाहुना र निम्तालुलाई जन्ती बनाई विवाहमा लाने चलन छ । यस्तोमा केहि विशेष ब्यक्तिको उपस्थिति विवाहमा भइदिए सो विवाह नै विशेष रहन्छ । अझ कसैको विवाहमा देवताहरु नै आए भने यो कति सौभाग्यको कुरा होला । शास्त्रमा यस्ता ५ विवाहरु छन् जहाँ देवताहरु हेर्न आएका थिए
१. कृष्ण र रुक्मिणीको विवाह
२. गणेशजीको विवाह
३. शिव पार्वतीको विवाह
४. राम सीताको विवाह
५. विष्णु लक्ष्मी विवाह
यहि वियोगमा नारद त्यहाँबाट निराश भएर फर्किए र बाटोमा जलाशयमा आफ्नो अनुहार हेरे । जहाँ उनको रुप श्रीबिष्णुको नभइ बाँदरको थियो । बिष्णुले नारदको चाह अनुसार हरी रुप दिए । हरिको एक अर्थ बिष्णु हुन्छ भने अर्काे बादँर हुन्छ ।
तब नारद बैकुण्ठ गई विष्णुलाई क्रोधित भई मनुष्यको रुपमा जन्म लिएर पृथ्वीमा जाने र स्त्रीको वियोग सहने श्राप दिए । त्यसैले बिष्णु र लक्ष्मीले राम र सिताको रुपमा जन्म लिई वियोग सहनु पर्याे । बिष्णु र लक्ष्मीको सोहि विवाहमा सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भएका थिए ।
Prevमोरङ जिल्लामा फेला परेको यस्तो अनौठो जीव देखेर स्थानीय आश्चर्यचकित [भिडियो सहित]
Nextको’रोनाको क’हर : सं’क्रमणबाट बच्न यसरी पातको मास्क लगाउँदै गाउँले